MOSKE 67 HA : Ahiana tsy ho vita noho ny fanamparam-pahefana nataon’i Mahafaly Olivier ny fotoam-pivavahana
Tahaka ny fanao isan-taona, tafiditra amin’ny hetsika momba ny fankalazana ny andron’ny 29 marsa ny fanatanterahana fotoam-pivavahana ao amin’ny moske 67 ha, izay tantanin’ny fikambanana Silamo malagasy (Fsm). 17 mars 2019
Fa amin’ity taona ity atahorana tsy ho tanteraka izany noho ny disadisa misy eo anivon’izany fikambanana izany, vokatry ny fanamparam-pahefana nataon’ny Praminisitra teo aloha Solonandrasana Mahafaly Olivier. Fikambanana mijoro ara-dalàna ary manana ny anjara toerany eo amin’ny fampiroboroboana ny finoana silamo sy fanabeazana ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny Fsm, saingy ankehitriny vokatry ny fanararaotam-pahefana nataon’ingahy Solonandrasana Mahafaly Olivier sy ny mpanolotsainy iray antsoina hoe Abdoul Hady tamin’ny fotoana naha praiminisitra naha lehiben’ny governemanta azy dia mikorontana ambony ambany.
Taorian’ny kongresy nataon’ny Fsm tany Mahajanga ny faha 5 sy 6 jona 2015 ka nahavoafidy ireo mpikambana ao amin’ny filan-kevi-pitantanana izay tarihin’i Hassim Mohamed dia nomen’ny teo anivon’ny Minisiteran’ ny Atitany « récépissé » mitondra ny laharana n° 3779-MID/SG/DGAT/ DAT/SGA/GAN tamin’ny 25 novambra 2015 izany fikambanana izany. Akory ny hagagan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ ny Fsm rehefa nampahafantarin’ingahy Abdoul Hady tamin’ny alalan’ny taratasy ny 18 jona 2018 teo fa izy no filohan’ny fikambanana Fsm. Nalefany niaraka tamin’izany taratasy izany ny « récepissé » hafa izay mitondra ny laharana n° 987/MID/SG/DGAT/DAT/SGA/GAN natao ny 01 jona 2018. Samy mitondra sonian’ingahy Solonandrasana Mahafaly Olivier ireo « récépissé » roa ireo.
Tsara ny manamarika fa efa nametra-pialana tsy ho mpikambana ao amin’ny Fsm intsony anefa ingahy Abdoul Hady tamin’ny volana jolay 2009 ary misy naoty mihitsy navoakan’ny minisiteran’ny Atitany ny amin’ny tsy fahafahany intsony mitsabaka amin’ny raharahan’ny fikambanana Fsm. Fa tsy noraharahan’ny Minisitry ny Atitany no sady praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly izany ary nohararaotiny ny fahefana teo am-pelantanany. Eny, fa na mpiara-miasa aminy iray vaokasika izao raharaha izao nilaza fa baiko midina no azony ary efa nampahafantarin’ ingahy Mahafaly Olivier fa tsy manara-dalàna ny fanomezana an’ingahy Abdoul Hady sy namany « récépissé » hafa, hoy hatrany izy.
Fanaovana taratasy hosoka
Andro vitsivitsy taorian’ny fampahafantaran’ ingahy Abdoul Hady fa izy no filohan’ny Fsm dia niaraka tamin’ny vadintany iray izy nanala ireo tompon’andraikitra tao amin’ny sekoly iray tantanin’ny Fsm. Tsy vitan’ izany, nesorina ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny komity mpitantana ny moske 67 ha. Manoloana izany toe-javatra izany, tsy nipetra-potsiny ireo ao amin’ny filan-kevi-pitantanan’ny fikambanana Fsm fa nitory an’ingahy Abdoul Hady sy ireo namany teny anivon’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany ny 11 septambra 2018 teo.
Fanaovana taratasy hosoka sy fanararaotam-pahefana ary fisolokiana andraikitra no anisany niampangana an’ireto farany. Amin’ny fomba ahoana tokoa moa no azo anekena fa misy birao vaovao mitantana ny fikambanana Fsm nefa mbola tsy tapitra akory ny fe-potoam-piasan’ilay birao voafidy ara-dalàna nandritra ny kongresy notanterahina tany Mahajanga tamin’ny taona 2015. Fanontaniana izay mitady valiny avy amin’ingahy isany Solonandrasana Mahafaly Olivier sy Abdoul Hady.
Tsy maintsy hatao famotorana i Mahafaly Olivier
Efa voaantso tao amin’ny PAC (Pôle anti-corruption) tetsy 67 ha ity farany sy ireo avy amin’ny filan-kevi-pitantanan’ny Fsm ary ramatoa tompon’andraikitra iray eo anivon’ny Minisiteran’ny Atitany ny zoma teo. Araka ny loharanom-baovao koa satria ankoatra ny fanamparam-pahefana, mamofompofona kolikoly ity raharaha ity dia tsy maintsy hatao famotorana ingahy Praminisitra teo aloha Solonandrasana Mahafaly Olivier. Ity farany izay mampiady ny silamo samy silamo noho ny fitiavan-tena diso tafahoatra. Fantatra fa hitondra fanazavana bebe kokoa mikasika ity raharaha ity ny eo anivon’ny filan-kevi-pitantanan’ny Fsm amin’ ity herinandro ity ka hotaterinay eto ny mety ho tohiny.
Tsara ny manamarika fa teraka tamin’ny taona 1972 ny fikambanana Fsm ary nahazo « récépissé » voalohany tamin’ny volana marsa 1974.